Uyenza njani iMithombo yokuKhanya yeBhlokhi yeMinecraft yakho
Ngu-Adam Lamb, uEmily Nelson
I-Minecraft isebenzisa iintlobo ezininzi zeebhloko. Ezinye zazo-ukukhanya kwelitye, isibane se-redstone, kunye ne-netherrack, ukucacisa-ukukhanyisa ukukhanya. Jonga iinkcukacha zohlobo lokukhanya kwebhloko nganye.
Glowstone yindlela eqhelekileyo yokuvelisa ukukhanya. Ukwenza ukukhanya okuqaqambileyo, kufuneka uthule i-4 yelitye elikhanyayo-evakalayo. Ngokumalunga nendlela yokubamba uthuli oluqaqambileyo, inzima ngakumbi le.
Unokufumana uthuli oluvuthayo enye yeendlela ezintathu: Urhwebile umntu wasekhaya, ubulale igqwirha, okanye uligobele kwiNether. Qaphela ukuba ayingabo bonke abantu belali abarhweba nge-glowstone, kodwa abanye bayayenza. Inketho # 2: ukubulala igqwirha.
Igqwirha kulula ukulibona - ingubo emfusa kunye nomnqwazi omnyama omnyama zizipho ezifileyo. Eyona ndlela yokubulala igqwirha kukushiya uluhlu lwezinto ezitshiziweyo kunye nokusebenzisa isaphetha kunye notolo. Xa uphumelele ekubulaleni igqwirha, iye yehle i-1 ukuya kwi-3 yeentlobo ezahlukeneyo zezinto. Unokufumana encinci njenge-1 kunye neninzi kangangesi-6 kwinto nganye.
Kwimigodi yam yokukhanya, kuya kufuneka ungene kwiNether. Emva kokuba ufike kwiNether, hamba ujikeleze uze ufumane ilitye lokukhanya. Ke, konke okufuneka ukwenze kukokwam (cofa ngasekhohlo). Iya kulahla uthuli olu-2 ukuya ku-4 lokukhanya.
Emva kokuba uthuli olu-4 lokukhanya, lixesha lokwenza ukukhanya. Nantsi indlela yokwenza:
Vula itafile yobugcisa.
Beka uthuli oluvuthayo kwitafile yobuqhetseba, enye kwibhokisi esezantsi ekhohlo, enye kwibhokisi esembindini yasekhohlo, enye kwibhokisi esembindini, enye kwibhokisi esezantsi esezantsi.
i-bactrim yosulelo lwendlebe
Thatha ibhloko yokuvutha ngokutshintshela uthuli oluvuthayo.
I-Glowstone yindawo efanelekileyo yokukhanyisa igumbi. Unokwakha ngayo okanye ubeke ngokulula kwikona efuna ukukhanya okungakumbi. Unako kwakhona ukubeka iibhloko zokukhanya ngaphandle ukukhanyisa ngaphandle kwezakhiwo okanye mhlawumbi indlela.
Ukwenza isibane se-redstone, kufuneka ibhlokhi yelitye elikhanyayo kunye nothuli olu-4 lwamatye abomvu. Usenokuba sisandla esidala ekwenzeni iibhloko zokukhanya. Ngokuphathelele uthuli lwelitye elibomvu, uyifumana ngokumbiwa kwelitye elimbombozo emva koko ulinyibilikise eziko.
Xa uqokelele ibhloko yelitye elikhanyayo kunye nothuli olu-4 lwelitye elibomvu, landela le miyalelo yokwenza isibane selitye elibomvu:
Vula itafile yobugcisa kwaye ubeke ilitye lokukhanyisa kwibhokisi esembindini.
Beka uthuli lwelitye elibomvu kwitafile yobuqhetseba, kunye nothuli olu-1 lwamatye ebomvu kwibhokisi esembindini yasekhohlo, 1 kwibhokisi ephezulu ephakathi, 1 kwibhokisi esezantsi esezantsi, kunye 1 kwibhokisi esembindini osekunene.
Thatha isibane sombala obomvu ngokutshintshana nelitye elikhanyayo kunye nothuli olubomvu.
pd 1 iziyobisi
Usenokuba uqaphele ukuba isibane se-redstone asikhanyisi kakhulu. Kungenxa yokuba awukabi namandla okwangoku. Ukulayita isibane selitye elibomvu, kufuneka itotshi ebomvu. Kwaye ukwenza itotshi yelitye elibomvu, kufuneka intonga kunye nothuli lwe-1 redstone.
Ngothuli kunye nelitye elibomvu ngesandla, landela le miyalelo yokwenza itotshi yelitye elibomvu:
Beka uthuli lwe-redstone kwibhokisi yeziko leetafile zokwenza izinto.
Beka intonga kwibhokisi esezantsi esezantsi.
Thatha itotshi uyitshintshele ngentonga kunye nothuli olubomvu.
Cofa ekunene ukubeka itotshi ecaleni kwesibane sombala obomvu, kwaye-voilà! - isibane siyakhanyisa. Unesibane esisebenza ngelitye elibomvu. Kulungile, huh?
INetherrack ayikhanyisi njengelitye lokukhanya okanye izibane. Endaweni yoko, kufuneka ubeke i-netherrack emlilweni ukuze ufumane ukukhanya. Ukufumana i-netherrack, kuya kufuneka uhambe kancinci kwi-adventure-nge-porther esezantsi.
Xa une-16 obsidian, unokwenza i-portal ngokulandela le miyalelo:
Beka iibhloko ezi-4 ze-obsidian emhlabeni naphi na apho ufuna ukufumana khona isiseko se-portal.
Gcina ezinye iibhloko ezi-4 nkqo kwicala ngalinye lesango.
Beka iibhloko ezi-4 zokugqibela ze-obsidian phezulu, ukudibanisa amacala amabini.
Umahluko phakathi kwe-oxycontin kunye ne-oxycodone
I-porther esezantsi ayikuvumeli ukuba ungasebenzi kuqala ngokusebenzisa intsimbi kunye neqhwitha. Ukwenza intsimbi kunye neqhwitha, kufuneka i-1 ingot yentsimbi kunye ne-1 flint. Unokwenza i-ingot yentsimbi ngokunyibilikisa isinyithi, kodwa ukufumana ilitye lenyengane kunzima ngakumbi. Ukuze ufumane ilitye lenyengane, kuya kufuneka uhlambe igrabile.
Emva kokuba unayo ingot yentsimbi kunye nentsimbi esandleni, okuseleyo sisiqwenga sekhekhe:
Vula itafile yokuyila kwaye ubeke i-ingot yentsimbi kwibhokisi esembindini wasekhohlo.
Beka ilitye elinqabileyo kwibhokisi yeziko letafile yobuqhetseba.
Thatha intsimbi kunye neqhwitha ukuze utshintshe ingot yentsimbi kunye neqhwitha.
Ukuvula i-portal esezantsi, yenza ukuba intsimbi yakho kunye nentsimbi ilungile kwaye ucofe ekunene kwibhloko ye-obsidian eyinxalenye yesango. Udonga olunombala omfusa luvela ngaphakathi kwisango. Ngoku, i-portal yakho yenziwe yasebenza!
Ngaphambi kokuba ungene kwiNether, qiniseka ukuba unayo ipikkixe nawe.
isetyenziselwa ntoni ipantoprazole
Ulungele? Tsibela kwi-portal esezantsi ukuze ukwazi ukuthumela umnxeba kwiNether. Xa ufika, phuma ngaphandle kwesango, kodwa qaphela umlilo kunye nodaka.
Xa uphuma kwisango, jonga phantsi ezinyaweni zakho. Uyabona iibhloko ezibomvu / ezipinki ome phezu kwazo? Yiyo netherrack. Thatha i-pickaxe yakho kunye neyam njengoko ucinga ukuba ufuna ukukhanya.
Xa uqokelele i-netherrack eninzi njengoko ufuna, tsiba ubuyele kwi-portal ukuya kwi-teleport ubuyele apho uvela khona. Thatha i-netherrack uye kuloo ndawo ufuna ukukhanya kuyo kwaye uyibeke emlilweni usebenzisa ilitye lentlabathi kunye nentsimbi oyenzileyo ngaphambili. (Cofa nje ekunene ukucima umlilo.)
Xa ubeka i-netherrack kwaye uyilayite, yima emva uyibukele umzuzu okanye emibini, ukuqinisekisa ukuba umlilo awusasazeki kwenye indawo ukusuka kwi-netherrack. Awufuni ukuza ekhaya ngenye imini kwaye ulwakhiwo lwakho lutshiswe!
Ulu skena njani uxwebhu kwikhompyuter
ip 207 ixabiso lesitalato
i-metoprolol succinate iziphumo ebezingalindelekanga
hydroxychloroquine 200 mg ithebhu
Ithetha ntoni pm ku facebook
indlela yokuncokola ngevidiyo kufacebook